Tsy hiara-hiasa amin’ny mpanongam-panjakana…
Doc Julien 07/03/2011
Nitohy toy ny mahazatra ny tolona teto amin’ny kianjan’I Magro Behoririka tamin’ity Alatsinainy 07 Martsa 2011 ity. Nanaitra ny maro ny laha-teny nataon’I Dr Julien avy ao amin’ny ankolafy Zafy Albert : lany mandat, lany daty tsy nahavita n’inona n’inona dia tsy mahita tenenina intsony I Andry Tgv hoy izy. Mody ny « samy malagasy » ny hirahirainy kanefa mandà ny hihavana izy. Tsy mieritreritra hamono an’I Andry Rajoelina ny ankolafy telo hoy izy satria tsy misy antony ny hamonona azy.
I Manoela indray dia nilaza fa : tsy mbola hita akory ny nitifitra teny Ambohimanarina hatramin’izao dia ny baomba indray no asesika. Milatsaha daholo izay te hilatsaka fa ataovy mazava ny fitsipika ary Ravalomanana efa nilaza fa sahy izy koa inona no atahoranareo hoy I Manoela.
Auteur Solo RazafyPublié le 7 mars 2011 Catégories Malagasy, Politique
10 pensées sur “Tsy hiara-hiasa amin’ny mpanongam-panjakana…”
7 mars 2011 à 23 h 29 min
Ny nahatonga an’i Dadananeo voa hongana teo amin’ny fitondra dia, ny adalany, tsy fahaizany nitantana ny raharam-panjakana, nanao azy be monkon-doha, fitiavan’tena diso tafahoatra, nangalatra sy nanodikodina ny fananam-panjakana, namarotra tanin’drazana @ vahiny, nandatsa-dra ny samy malagasy…sns sns.
Ô ry ilay HAJAN a !
8 mars 2011 à 3 h 40 min
Kely loha tsy misy ilàna azy mihitsy ilay Hajan!… Diky no mitazona ny lohany, hany ka tsy misy mihitsu zavatra tafiditra ao fa dia loto foana!
Loham-poza ! Tsy mieritreritra ! Tsy misy fahamenarana !
Fa ry Hajan ve jamba?I TGV tsy mahay mitantana raharahm-pirenena satria mikoroso fahana ny firenena (jereo koa ny antontan’isa).Ry bitro dia nandoro trano misy olona velona dia maty may kila ny olona rehetra,dia ahoana ireny fitifirana olona avy aty a-damosina ireny?Dia ahoana koa izao 99% ny vidin’ny solintany malagasy ho lasan’ny total dia ny 1%an’ny malagasy ankoatran’ireo olona alefa any am-ponja maimai-poana sns.Ny an’i tunisie sy egypte ka niainga tamin’ny vahoaka tsy nomena vola fa tsy ohatran’ny an’i TGV efa complot niarahana tamin’i reny malala izay mamatsy vola ny olona mba hitokona.Tsy mitovy mihintsy.Mba diniho tsara.
Rehefa tsy mitovy hevitra @nareo an, tsy manoana an’i Dadanareo, dia maivan-doha na hoe mpisolelaka @ vazaha, mpamadi-tanindrazana, mpankasitraka ny frantsafrika…sns.
8 mars 2011 à 21 h 32 min
Tena mifanao ambony/ambany marina ireto Hajan, vahoaka, jipo sy iza koa moa ?
Hajan tokony fokontany aloha no entin’i joelinanareo fa tsy milingilingy hitondra firenena, zao ny vahoaka mijaly, aiza ny fampanantenana nataony @ vary 500 ny Kg, menaka 2500 ny L, zao lasa vary 500 kapoaka, menaka 4900 L ny hena tsy haiko intsony ny kilao fa tsy mahavidy intsony izahay;
Précédent Article précédent : Mby aiza ny fanovana?
Suivant Article suivant : Dingana farany ve ?